DOWNLOAD ADVANCED PDF COMPRESSOR KACHA ỌHỤRỤ VERSION - MMEMME NYOCHA - 2019
Di elu PDF Compressor 2017
Ọbụna ngwaọrụ ndị a pụrụ ịdabere na ha anaghị ejide ha na njehie na mmejọ. Otu n'ime nsogbu kachasị na ngwaọrụ na android bụ nghọta: ekwentị ma ọ bụ mbadamba anaghị aza aka, ọbụnadị ihuenyo enweghị ike agbanyụ. Ị nwere ike ikpochapụ ihe a kwụsịrị site na ịmegharị ngwaọrụ ahụ. Taa, anyị chọrọ ịgwa gị otu esi eme ya na ngwaọrụ Samsung.
Degharia ekwentị gi ma obu samsung mbadamba
E nwere ọtụtụ ụzọ iji malitegharịa ngwaọrụ ahụ. Ụfọdụ n'ime ha dị mma maka ngwaọrụ niile, ebe ndị ọzọ dị mma maka smartphones / mbadamba na batrị nwere ike iwepụ. Ka anyị jiri ụzọ zuru ụwa ọnụ malite.
Nzọụkwụ 1: Malitegharịa nchịkọta isi
Usoro a nke iweghachi ngwaọrụ dị mma maka ọtụtụ ngwaọrụ Samsung.
Were ngwaọrụ nro n'aka gị wee jide igodo ahụ "Mpịakọta Ala" ma "Nri".
Jide ha maka ihe dịka 10 sekọnd.
Ngwaọrụ ahụ ga-agbanyụ ma ọzọ. Chere ruo mgbe a na-arụ ọrụ zuru ezu ma jiri dị ka ọ dị na mbụ.
Usoro ahụ bụ ihe bara uru na enweghị nsogbu, ma kachasị mkpa, naanị ngwaọrụ kwesịrị ekwesị na batrị na-enweghị ike iwepụ.
Usoro 2: Kwupu batrị ahụ
Dị ka aha ahụ pụtara, a na-emepụta usoro a maka ngwaọrụ nke onye ọrụ nwere ike wepu mkpuchi ma wepụ batrị ahụ. Emere nke a dika nke a.
Gbanyụọ ihuenyo ngwaọrụ wee chọta ncha, na-ejide onwe gị nke ị nwere ike ịmepụ akụkụ nke mkpuchi ahụ. Dịka ọmụmaatụ, na njirimara J5 2016, uzo a dị ka nke a.
Nọgide na-apụnara ihe mkpuchi ahụ. Ịnwere ike iji ihe dị mkpa na-adịghị egbu egbu - dịka ọmụmaatụ, kaadị akwụmụgwọ ochie ma ọ bụ onye mgbasa ozi guitar.
Wepu mkpuchi ma wepụ batrị ahụ. Kpachara anya ka ị ghara imebi kọntaktị ahụ!
Chere maka ihe dị ka sekọnd 10, wee wụnye batrị ma jidekwa mkpuchi ahụ.
Tụgharịa smartphone ma ọ bụ mbadamba.
A ghaghị ime nhọrọ a iji maliteghachi ngwaọrụ ahụ, ma ọ gaghị adabara ngwaọrụ ahụ, ikpe ya bụ otu unit.
Usoro 3: Weghachite Software
Usoro ntinye a dị nro dị na ikpe ahụ mgbe ngwaọrụ anaghị agbaze, mana ọ na-amalite ịkwụsịlata (ngwa ngwa na oge igbu oge, ịdị mma, nkwụsị aka nzaghachi, wdg).
Mgbe ihuenyo ahụ dị, jide igodo ike maka 1-2 sekọnd ruo mgbe menupụtapụta gosipụtara. Na menu a, họrọ "Reboot".
Ịdọ aka ná ntị ga-apụta na ị kwesịrị ịpị "Bubatagharịa".
Ngwaọrụ ahụ ga-agbapụta, na mgbe nbudata zuru ezu (na-ewe ihe dị ka nkeji) ọ ga-adị maka iji ihe ọzọ mee ihe.
Dị ka ọ dị, na ngwaọrụ ahụ rapaara, o yikarịrị ka software ọ ga-akwụsị.
Iji chịkọta: usoro ịmalitegharịa ekwentị Samsung ma ọ bụ mbadamba ihe dị nnọọ mfe, na ọbụna onye ọrụ novice nwere ike ijikwa ya.